Gbasara Anyị | Lingshou Huajing Mica Co., Ltd.
Nabata na Huajing Mica
Lingshou Huajing Mica Co., Ltd., nke emere na 1994, nwere akụkọ ihe mere eme nke afọ 27 ruo ụbọchị. Ọ bụ mmepụta gbakwasara enterprise tumadi n'ime na-esi ọtụtụ nhazi nke nonmetallic ore gụnyere eke mica, sịntetik mica, ọtọ ịnweta wdg Huajing na-enye zuru ụwa ọnụ ngwọta dabere na arụmọrụ ịnweta elu-tech, elu-arụmọrụ ngwa, otu nke mica mmepụta ekpuchi dum ntụ ntụ klas usoro. Companylọ ọrụ ahụ esetịpụla ụlọ ọrụ nyocha na mmepe na mpaghara dị iche iche, nke bụ inye nkwado nkwado siri ike maka imepụta ụlọ ọrụ mmepụta ihe na isi ihe ịchọ mma. Mgbe ihe karịrị afọ 20 nke na-aga n'ihu mmepe na ọhụrụ, Huajing e ọdịda "National High-tech Enterprise", "Hebei Province Special New Enterprise" na ndị ọzọ yiri asọpụrụ iru eru. Huajing na-agbaso okporo ụzọ nke ihe ohuru na mmepe, na-agbaso internationalization nke ika ya na nhazi nke ngwaahịa ya. Ọ na-agba mbọ iji wuo a "elu-tech na uru ịnweta ọtọ ihe ụlọ ọrụ", na-elu-edu ịnweta ihe dị ka ndị na-akwọ ụgbọala maka akụ na ụba nke China na ụwa.
Guzosie Ike Na
Lingshou Huajing Mica Co., Ltd., nke e guzobere na 1994.
Lingshou Huajing Mica nwere akụkọ ihe mere eme nke afọ 27 ruo ugbu a.
Ihe karịrị afọ 20 nke na-aga n'ihu mmepe na ọhụrụ.
Huajing nwere ndi otu ndi okacha amara nwere ihe ruru otu nari, ha tinye aka na imeputa ihe ndi mepere emepe na mica na ihe ndi ozo ndi ozo. ihe ndozi gburugburu ebe obibi, na ihe ndị pụrụ iche ịgbado ọkụ, emeriela ebe na-eduga maka Huajing na mpaghara ngwa ahụ. Companylọ ọrụ ahụ na-agbaso usoro atumatu dị elu-na-adigide ma were ihe sayensị na teknụzụ dị ka isi asọmpi. Karịsịa n'ime afọ ndị na-adịbeghị anya, ọ nwere uru ndị na-eduga na teknụzụ na ahụmịhe bara uru na mmepụta nke mica sịntetik, ntinye nke mineral na-arụ ọrụ, mgbake zuru oke na itinye n'ọrụ nke akụrụngwa dị ala na akụkụ ndị ọzọ metụtara ya.
Huajing na-agbaso usoro usoro nlekọta njikwa dị elu. Ya factory management e dị na ISO9001: 2015 quality management usoro, ISO14001: 2015 gburugburu ebe obibi management usoro na OHSA18001: 2007 ọrụ ahụ ike na nchekwa management usoro. N'ihi mmụba nke njikwa ya na nrụpụta nke aka ya, Huajing nwere ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ ndị ahịa 400 n'ụwa niile, dịka ụlọ ọrụ ama ama ama ama Kingfa Scince & Technology, Oakley New Materials, yana mba ama ama ama ama ama dị ka German Basf, ndị Japanese Mitsubishi Chemical, Nippon Paint, ndị Korean LG, Hyundai, na American Dow chemical, wdg All ndị a kpọtụrụ aha guzosie ike ogologo oge, mụ mmekọrịta nke imekọ ihe ọnụ na ụlọ ọrụ anyị.
Site na ọkachamara, ịkwụwa aka ọtọ, nkwanye ùgwù, na ihe ọhụrụ dị ka ụkpụrụ ya, Huajing Mica na-atụ anya ịmepụta ọdịnihu ka mma gị na ọhụụ nke ịmeziwanye oge niile na afọ ojuju nke ngwaahịa ndị ahịa.